Warshadda Soo Saarka Qaybta - Shiinaha Soosaarayaasha Soo Saarayaasha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
Qalabka Bixiyaha KQGV (Mashiinka Kiciye)
Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismooyinka dhaadheer, bulshada, guriga, isbitaalada, iskuulada, garoomada diyaaradaha, dukaamada waaweyn, hoteelada, dhismooyinka xafiisyada iwm.
KZA / KZE / KCZ Bamka saliida leh
Badanaa waxaa loo isticmaalaa gudaha sifaynta saliidda, kiimikada kiimikada, warshadaha kiimikada, warshadaha wax soo saarka dhuxusha, warshadaha waraaqaha, warshadaha badda, warshadaha korontada, cuntada, daawooyinka, ilaalinta deegaanka iyo warshadaha kale.
KQL Toos ah oo iskuxidhan oo xariijin ah Marxalad Hal Ballaaran oo Mashiin ah
Model KQL waa Toos-isku-laaban-saf ah hal mashiin bamboo-gacmeed toosan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa nidaamka qaboojiyaha iyo kuleylka. Qaabeynta qaabdhismeedka gaarka ah wuxuu siinayaa faa'iidooyinka isku halaynta sare iyo waxtarka sare.
XBD Bamka Dab-demiska
Waxaa badanaa loo adeegsadaa shaqada dab-demiska ee dabaqyo kala duwan iyo iska caabin tuubbo.